Decentraland စျေး - အွန်လိုင်း MANA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Decentraland (MANA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Decentraland (MANA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Decentraland ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $48 904 632.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Decentraland တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Decentraland များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DecentralandMANA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0974DecentralandMANA သို့ ယူရိုEUR€0.0826DecentralandMANA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0747DecentralandMANA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0888DecentralandMANA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.871DecentralandMANA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.615DecentralandMANA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.16DecentralandMANA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.364DecentralandMANA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.129DecentralandMANA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.136DecentralandMANA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.18DecentralandMANA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.755DecentralandMANA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.529DecentralandMANA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.28DecentralandMANA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.16.4DecentralandMANA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.134DecentralandMANA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.148DecentralandMANA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.03DecentralandMANA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.676DecentralandMANA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10.41DecentralandMANA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩115.25DecentralandMANA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦37.33DecentralandMANA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.19DecentralandMANA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.68
DecentralandMANA သို့ BitcoinBTC0.000008 DecentralandMANA သို့ EthereumETH0.000254 DecentralandMANA သို့ LitecoinLTC0.00179 DecentralandMANA သို့ DigitalCashDASH0.00107 DecentralandMANA သို့ MoneroXMR0.00109 DecentralandMANA သို့ NxtNXT7.6 DecentralandMANA သို့ Ethereum ClassicETC0.0144 DecentralandMANA သို့ DogecoinDOGE28.1 DecentralandMANA သို့ ZCashZEC0.00118 DecentralandMANA သို့ BitsharesBTS3 DecentralandMANA သို့ DigiByteDGB3.12 DecentralandMANA သို့ RippleXRP0.346 DecentralandMANA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00336 DecentralandMANA သို့ PeerCoinPPC0.323 DecentralandMANA သို့ CraigsCoinCRAIG44.37 DecentralandMANA သို့ BitstakeXBS4.15 DecentralandMANA သို့ PayCoinXPY1.7 DecentralandMANA သို့ ProsperCoinPRC12.22 DecentralandMANA သို့ YbCoinYBC0.00005 DecentralandMANA သို့ DarkKushDANK31.25 DecentralandMANA သို့ GiveCoinGIVE210.93 DecentralandMANA သို့ KoboCoinKOBO22.19 DecentralandMANA သို့ DarkTokenDT0.0897 DecentralandMANA သို့ CETUS CoinCETI281.28